Fire Uvavanyo theory kunye nendlela
akukulinga Fire yinkqubo kushishino eqhelekileyo zokufumana igolide zohlalutyo elementi iqela platinum (PGE) data evela ores phezulu kwibakala. Yinkqubo maxesha kodwa uhlobo yayo kwecacileyo, iye yasetyenziswa kangangeenkulungwane. akukulinga umlilo ukubala wegolide kuzo zonke iintlobo isampula, kuquka iisampulu drill ezingundoqo, umhlaba kunye chip.
Isampulu ungacolwanga le esikalini kwaye zixutywe arhente fluxing. Le inceda ukubhobhoza e yokunyibilika, inceda fuse isampuli kubushushu elifanelekileyo kwaye ikhuthaza ukwahlulwa izinto gangue evela amatye anqabileyo. Ukongeza wobhobhozayo, ilothe okanye nickel idityaniswa njengomqokeleli. Isampulu ke itshiswe eziko apho iifyuzi kwaye okuhlukana izinto umqokeleli 'iqhosha', nto leyo iqulathe izimbiwa anqabileyo.
ONALO METAL lokumba
Xa iqhosha abazahlulayo ukusuka gangue, le amatye anqabileyo acatshulwe kwi-umqokeleli ngapha kwenkqubela ebizwa ngokuba cupellation. Xa iqhosha lupholile, oko abazahlulayo ukusuka zeBlack kunye
• Xa phambili isetyenziswa njenge umqokeleli, le yiluciferase elikhokelayo kwaye bangene cupel kokushiya bead metal elinqabileyo. Le bead ke ixutywe Qalisa regia ukwenzela uhlalutyo.
• Xa nickel isetyenziswa njenge umqokeleli, iqhosha Utyunyuziwe kwaye unyityilikiswa zehydrochloric acid namasalela ke ecociweyo ukususa izinto zangaphandle, eshiya intsalela metal axabisekileyo lokucoca ulwelo.
UHLAHLELO AND ubhaqo
Gold and PGE kungenziwa zahlalutywa eziliqela
Flame Atomic ukufakwa (AA)
• I-isampuli unyityilikiswa Qalisa regia uze aspirated ngendlela nelangatye iasithilini. A umtha wokukhanya kwi efanayo ombala ukuba ngegolide igqithiselwa kwi edangatyeni. Igolide kwisampulu lubamba ukukhanya yakheke ngokuxhomekeke uyondelelwano lwee- sakhi isisombululo. Kukufakwa kufaniswa izisombululo standard ukumisela xiyimiso igolide kwisampulu.
INDUCTIVELY bandakanya plasma-Atomic
Mhlobo SPECTROMETRY (ICP-AES)
• Isampulu zolwelo ke aspirated kwi plasma negolide equlethwe likhipha isampula ukukhanya yamaza isici. Le intensities zokukhanya lobuso zibalwa kwaye kuthelekiswa yi software kwabo kwezisombululo standard zegolide-langa. Le software ke
ibala xi igolide kwisampulu.
INDUCTIVELY bandakanya plasma-IPHULO
• Igolide eziqulathwe kwisampulu zolwelo into insimbi. Ngobunzulu uphawu kwi ubunzima 186 ilinganiswa, kwakunye maza yazo naziphi na izinto ezineeathom ezilinganayo engase ziphazamisa. Le ngamandla kwi 186μ lulinganiselwa kwaye kuthelekiswa yi software kwabo of gold- standard ethwele izisombululo ukumisela yoxinaniso zegolide kwisampulu.
Instrumental neutron iklayenti yovulo
• I-amasalela licatshulwa iphepha filter kwaye okufakwe kwi ongundoqo reactor yenyukliya. izinto ezininzi zibe radioactive yaye umsindo gamma- ray radiation of yamaza ezithile.
Amabanga zegolide zibalwa zaza zathelekiswa kunye nemigangatho zegolide ukujonga
yoxinaniso zegolide kwisampulu.
Zegolide zahlolwa kulingwa metallics umlilo ibandakanya ukuhluza 500g na isampuli 106 microns. Iqhezu plus ngumlilo wakha walinga igolide kunye kulingwa nempinda lwenziwa kwi thabatha amaqhekeza. Umxholo zegolide ubunzima ubungakanani amaqhezu, umxhesho ontlakantlaka kunye iqhezu ecikizekileyo, kunye nesiqulatho negolide bebonke ingxelo.
Uqhagamshelwano: Tina@llxtl-china.com 0086-13975373459
YANGAPHAMBILI Iimpawu zendlela yokucoca umlilo
Indlela yezithako ze-ASAY OKULANDELAYO